Ahoana no mba hanatsarana ny fifandraisana fianakaviana? Toa an'i Neny a mahafa-po kokoa, zaza tsara tarehy kokoa sy sambatra kokoa Dady? Fa nahoana no tsy hanao fety? Aza manahy, BVC hanampy anao hamita ny asa madio. .
Manana namana maro sy te-gaga azy ireo, nahoana no tsy gaga izy ireo tamin'ny fampiantranoana ny BBQ fety? Aza avela ny mahafantatra ny korontana trano mahazo an-dalana ny mankafy ny fotoana niaraka tamin'ny namana tsara. Ity ny 5 dingana drafitra mba hanampy anao manadio an-tranonao - tsy misy adin-tsaina, vao mora-to-hanatratra asa.
Ary aiza no manomboka? Fa ny BBQ antoko, ny vahiny dia mandany ny fotoana ny ankamaroan'ny any ivelany, toy izany koa ny manan-danja indrindra mba hanadio faritra ao an-trano no fidirana, efitrano fandraisam-bahiny, lakozia sy ny efitra fandroana. Tsy ilaina ny manadio ny trano iray manontolo fa mifantoka amin'ny antoko lalana - ny sain'ny ankamaroan'ny olona ho amin'ny latabatra, talantalana sy ny toerana mba hametraka ny zava-pisotro.
Ny mora, monja dingana 5:
1. Fresh & Declutter ny trano.
Alohan'ny manomboka, manokatra varavarankely vitsivitsy rivotra avy an-tranonao izany fofona mamy sy madio. Mandrehitra labozia manitra na tifitra ny toerana amin'ny deodoriser manampy misy hanitra Ary mampirehitra ny toe-po. Next tonga ny fotoana mba hiatrehana faritra rehetra ao amin'ny antoko lalana izay cluttered loatra. Mitady toerana vonjimaika ny hametraka ny zavatra tsy ilaina toy ny fanasan-damba harona na efajoro mba hitahiry ireo mandra-lanonana no vahaolana tsara indrindra sy tsotra indrindra.
2. Diovy ny Door Gate sy ny Fidirana
Ny zavatra voalohany ny vahiny no hahita no fidirana noho izany dia tena ilaina mba hanao tsara ny Fiheveran'ny Olona Ahy. Ve ny hamafa haingana ivelany, hatao manaisotra ny loto rehetra. Avy eo manao ny lalanao ao anatiny sy manao ny hamafa manodidina ny efitrano fidirana, fanesorana izay manangona sy ny fametrahana kiraro, palitao, satroka sy ny namany Sary avy eo imasony. Vovoka tamin'ny latabatra na ny haingon-trano sy ny zavatra Mitifitra deodoriser ny sasany.
3. Prepping ny efitrano fandraisam-bahiny
aloha maka toerana na avy tamin'ny zavatra, nanitsy fandriana, cushions, ondana sy ny refolding mandroaka ny (lehibe mba hamitana ny misy stains - Na izany aza dia tsy mila manao izany rehefa mampiasa akory va ny BVC vokatra) . Manaraka manadio ny latabatra, TV lamba feno vovoka sy ny faritra amin'ny alalan'ny fampiasana ny microfiber lamba. Farany, misy banga ny vovoka na biby volo teo amin'ny tany, ary aza adino ny manadio ny zana-kazo skirting mampiasa ny vacuum Hose ny borosy na ny miraiki-po.